Uhuru Kenyatta: Soomaalidu waxey doonayaan iney dalkeena ka dhigaan dalkooda oo kale – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 18 April 2014 4 April 2019
Nairobi – Mareeg.com: Madaxweynaha dalka Kenya, Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in Soomaalida ku nool dalkiisu doonayaan iney Kenya ka dhigaan sida Soomaaliya oo kale oo dalkiisa burburriyaan, arrinkaas oo uu sheegay iney ka hortegayaan.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa hadalkan ka jeediyey munaasabad tababar loogu soo xiray xubno ka tirsan booliska Kenya, wuxuuna xusay in howlgallada ka dhanka ah Soomaaliya ay sii socon doonaan illaa dalka Kenya nabad laga dhigayo.
“Soomaalida dalkooda ayay burburriyeen, Soomaaliya waa dal aan dawlad laheyn muddo dheer, marka Soomaalidu waxay doonayaan inay dalkeenna u bur-buriyaan sidii ay dalkooda u burburiyeen marka waan iska celinaynaa,” ayuu yiri Kenyatta.
Madaxweynaha Kenya ayaa tilmaamay in sababta Soomaalida sharci darrada ku jooga dalkiisa lagu masaafirinayo tahay si ay uga hortagaan khatar ku imaan karta Kenya.
“Go’aanka aan dalkeenna uga saarayno dadka sharci-darrada ah waxaa weeye inaanay dadkaasi fursad u helin inay dalkeenna burburiyaan,” ayuu sidoo kale yiri Uhuru Kenyatta.
Todobaadyadii lasoo dhaafay ayaa waxaa dalka Kenya lagu qababtay Soomaali farabadan, kuwaasoo in badan la sii daayey, ilaa 200 oo ka mid ahna laga dejiyey garoonka diyaaradaha Muqdisho, halka qaar kalana weli xabsiyada ku jiraan.
Kenya ayaa aaminsan in weerarada qaraxyada ah ee ka dhaca dalkeeda ay lug leeyihiin dad Soomaali ah, waxeyna qaadatay go’aan ah in Soomaalida xabsiyada lagu guro.